Kutyhilwe ukuba ingakanani i-RAM eya kuba nayo i-iPhone 8, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone X | Iindaba zeGajethi
Kancinci kancinci ukumangaliswa ukuba iApple ikulungiselele ingomso kuyatyhileka Septemba 12. Kwaye ukuba ukuvuza kwenguqulelo ye-iOS 11 GM ibisisifuba sobutyebi apho unokufumana ulwazi oluninzi malunga neemodeli ze-iPhone ezilandelayo. Okokugqibela Ulwazi oluvuyiweyo lubhekisa kwinani le-RAM eziya kuba nazo iimodeli ezintsha.
Khumbula ukuba, ukuba ukuvuza kuphumelele, siya kuba neemodeli ezintsha ezi-3. Ngaphezu koko, sele sisazi ukuba iApple izakutsibe uguquko olusengqiqweni lonyaka kunye nokubheja kwinani elitsha: I-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus. Ezi modeli ziya kuba "uluhlu lokungena" kwaye ziya kuthatha indawo yeemodeli zangoku. Kuyabonakala ukuba ezi nguqulelo zimbini ziya kuba nescreen seLCD. Okwangoku, imodeli yokukhumbula iminyaka eli-10 okoko kwasungulwa i-iPhone yokuqala. Lo uya kubhaptizwa njengo I-iPhone X kwaye iya kubheja kwiphaneli ye-AMOLED ngetekhnoloji yeTone yeNyaniso njengaleyo onokuyonwabela kwi-Pro Pro efumana uphononongo olulungileyo.
Kodwa ngaphandle kokukwazi ukubala ngezitora ukuya kuthi ga kwi-512 GB -Jonga inani-, isixa se-RAM esiya kusetyenziswa ziimodeli ezintathu sihluziwe ngumqambi wenkampani. Okubuhlungu kukuba, akusayi kubakho zimanga kulo mba. Kubonakala ngathi, I-iPhone 8 iya kuba ne-2GB ye-RAM; i I-iPhone 8 Plus kunye ne-iPhone X ziya kubheja kwi-3 GB Imemori ye-RAM. Ukukunika umbono, la manani ahambelana nezo sinokuzifumana kwi-iPhone 7 yangoku (2 GB) kunye ne-iPhone 7 Plus (3 GB).
Kuyinyani ukuba xa sithelekisa ezi mali ze-RAM kunye neemodeli zokugqibela eziphezulu kwi-Android, iApple iyaqhubeka nokulahleka. Kodwa kuyinyani ukuba ukusebenza kwe-iOS kwezi khompyuter- kunye nezi nkcukacha zobuchwephesha- kwenza ukusebenza kakuhle kwaye akufuneki bungakanani ngaphezu kwesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Kutyhilwe ukuba ingakanani i-RAM eya kuba nayo i-iPhone 8, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone X